ABOn miseensota GS gidduu kana seera dhaabichaan ala socho’an irratti tarkaanfii fudhate. – Kichuu
HomeNewsABOn miseensota GS gidduu kana seera dhaabichaan ala socho’an irratti tarkaanfii fudhate.
Ibsi galgala kana dhaabicha irraa bahe akka ibsutti, hogganoota ABO naamusaafi heera ABO’n qabu cabsanii sochii hinmalle taasisan hanga koreen seeraaf tohannaa ABO murtii itti kennutti hojii qabsoo kam irraa qooda akka hinfudhanne murteesseera.
Bal’insa isaa daqiiqaa muraasa booda isniif dhiheessina; nu hordofaa!
Murni Maqaa Malee Mataa Hin Qabne, ABO dhaaba ummatta miliyoonotaan wardiyaa godhatee qabu diiguuf jecha Hooganoota isaa manatti uggursiisuun ni diigna jettee Tulluu dhiibaarti. Oromoo itti ilaalladhu, waan Rirma dhaaba keessaa kana!
Dammallaashonni hoteela Hilton keessa taayanii maqaa ABO tiin ibsa kennan qondaalota pp ti.
“Gaafa waajjira keessaa humnaan poolisiin na baase Hagayya 1/2020 irraa eegalee miseensi kamuu waajjira deemuu hin danda’u. Waajjira deemuu haa dhiifnu malee bakka jirrutti hojii itti fufnee jirra. Adoolessa 30/2020 akkan manaa ba’ee hojii deemu natti himamee ergasii uggurri narra hin jiru. Ergasii Jaal Araarsoon mana dhufee ibsayyu waliin kennineerra. Amma garuu ibsa har’a kenname kana ani quba hin qabu.”
Jaal Daawud Ibsaa Oromia News Network irratti kan dubbatan.
Shirri ABO irratti raawwatame,shira Oromoo cabsuuf raawwatame keessaa isa guddaadha.
HD paartichaa obbo Daawud Ibsaa mana jireenyaa isaanii keessatti hidhuun bakka isaan hin jirretti, hayyu duree paartii jijjiiruun Jaal Araarsoo Biqilaa filan.
Kunis kan raawwatameef Oromoon filannoodhaan akka hiree ofii hin murteeffanneefi. ABO’n erga Boordii filannoo biyyaalessaatti galmaa’ee booda hayyu duree jijjiiruun kuni akka ABO’n filannoo dhufu kanarratti dorgomaa cimaa hin taaneef yookaan akka mootummaa amma aangorra jiru kana deeggaruuf yookaan immoo filannoon booda mootummaa kanaan akka walitti makamuufi. Shirri kuni ABO kolaasuuf kan hojjatameedha. ABOn garuu hin kolaafamu.
Oromoon dammaqee qabsoo ofii finiinsuu qaba. Diinnis diina caala!
Kaayyoo, Heeraa fi Seera ABO Jala Hiriirra!
Fonqolchi hooggansa ABO irratti bilxiginnaadhaan qindeeffame akkuma itti fufetti jira.
“Amma booda dhaabichi Itti Aanaa Hayyu Dureetiin geggeeffama waan ta’eef Hayyu Dureen ibsa kanarratti hin argamne” jedhe Jaal Toleeraa Adabaa.
Maaliif? Hayyu Dureen maal taanaan Itti Aanaa Hayyu Dureetiin geggeeffama?
Yeroo darbes “Haga kora sabaa itti aanutti hogganni keenya Jaal Araarsoo Biqilaati malee nama biraa hin beeknu” jedhee ture Jaal Atoomsaa Kumsaa.
Amma namuu daba deemaa jiru qulqulleeffachuu danda’eera jedheen amana.
“Yoo Daawudiin achii kaastan nagaa argattu” jedhee kan hogganoota ABO kana gorses inni gorfamee yaada kana fudhates numa nyaatama.
ABOn haa jiraatu!
Qajeelaa Mardaasaa ibsa har’a miidiyaaf kenne irratti akkas Jedhe”jaal Daawud Ibsaa bilbilli harkaa isaa ani beeku cufaadha argachuun dandeenye erga jedhee booda garuu darbee darbee VOA fi BBCn Afgaaffii ni godhuuf natti fakkaata Jedhe”.
Hubadhaa natti fakkaata Jedhe malee Afgaaffii godheera hin jenne. Dubbiin Shira qabaachuu caalaa wanti inni sobu Kun ummata Oromoo biratti hedduu keessattuu qabsaa’ota jaallan isaa biratti fi miseensota ABO biratti hedduu nama gaddisiisa.
Osoo HD ABO jaal Daawud Ibsaa Afgaaffii kennuu isaa dhagahee jiruu ummatni dhaguu maaliif natti fakkaata jedhee?
Dhuguma dubbiin Shira hin qabu osoo tahe HD jaal Daawud Mana jireenyaa isaa deemanii maaliif quunnamuu dadhaban hoggansa isaa mitii?
Jaalli qabsoo yeroo rakkoo go Gammachuu waliin qoddachuuf malee Shira duubaan hoggana isaa irratti xaxuudhaa?
Qajeelaa Mardaasaa akka tikti isinitti taphachaa jirtu qabatamaa beekna nu kijibiin kanaa booda Saba ati Nan qabsaa’aaf jettee ummatatti baatu hin jiraatu.
አማርኛ ዜና – የኦነግ አቤቱታ፣ የኦሮሞ ነፃነት ግንባር ገዢው ፓርቲ ዘርፈ ብዙ ጥቃቶች እያደረሰብኝ ነው አለ። ነሃሴ 05/2012 ዓ.ም
ሀዲያ የኦሮሞን የፖለቲካ ትግል የሚደግፍባቸው 20 ምክኒያቶች
1. የኦሮሞ የእኩልነት፣የፍትህ፣ የሪትዕና ራስን በራስ የማስተዳደር ጥያቄ ትክክለኛና ተገቢ ስለሆነ፣
2. በኦሮሞ ላይ የሚፈጸመውን ዘግናኝ ግዲያ፣ የጅምላ እስራትና ስም የማጥፋት ዘመቻ ስለሚንቃወም፣
3. ኦሮሞ በህብራ-ብሔራዊ ፌዴራልዝምና ራስን በራስ ማስተዳደር መሪህ የሚያምን ስለሆነ፣
4. እያቆጠቆጠ የመጠው የቀኝ ክንፍ አክራሪዎች አሃዳዊ የጭቆና ስርአት ኢትዮጲያን እንዳይበትን ኦሮሞ የሚያደርገውን ትግል ከልብ ስለሚንደግፍ፣
5. ኦሮሞ ግዙፍ የህዝብ ብዛት ያለው አውራ ብሔር እንደመሆኑ የአገርቱን የፖለቲካና የኢኮኖሚ እጣ ፈንታ የመወሰን አቅም ያለው ትልቅ ህዝብ ስለሆነ፣
6. ጀዋርና የኦሮሞ ፖለቲከኞች የታሰሩበት ዋናኛው ምክኒያት የሀዲያና የደቡብ ብሔሮችን የክልልነት ጥያቄ ከልብ በመደገፋቸው ስለሆነ፣
7. የኦሮሞ ምሁራን፣ ፖለቲከኞችና አክትቭስቶች በቀኝ ክንፍ አክራሪዎች የተጠመዱበት ዋናኛ ምክኒያት ከኦሮሞ አልፈው የብሔር ሔረሰቦችን የፖለቲካ ንቃታ ህልና በከፍተኛ ሁኔታ እያሳደጉ በመምጣታቸው መሆኑን ስለሚናውቅ፣
8. የብሔር ብሔረሰቦች ብቸኛ ልሳን OMN ቴሌቭን ጣቢያ በኢትዮጲያ ለጊዜውም ብሆን መዘጋቱንና ጋዜጠኞቹ መታሰራቸውን ስለሚንቃወም፣
9. ኦሮሚያ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ሰርተው የሚኖሩበት የሁሉም ቤት ስለሆነ፣
10. ሀዲያ ከኦሮሚያ ጋር በጅኦግራፊ በሰፊው ስለሚዋሰን የሀዲያ እጣ ፈንታ ከኦሮሚያ ጋር የተቆራኛ በመሆኑ፣
11. ኦሮሚያ ለሀዲያ ትልቁ የኦኮኖሚና የገበያ መእከል ስለሆነ፣
12. ኦሮሞ በባህሉ አቃፊ ስለሆነ እጅግ ብዙ የሀዲያ ልጆች በኦሮሚያ ስለሚኖሩ፣
13. ኦሮሞ እንደ ሀዲያ በታሪክ የጭቆና ገፈት ቀማሽ ህዝብ በመሆኑ የኦሮሞ ህመም ህመማችን ስለሆነ፣
14. ኦሮሞና ሀዲያ የኩሽ ቤተሰብ ህዝቦች ስለሆኑ፣
15. የኩሽ ቤተሰብ ከመሆናቸው በተጨማሪ ሀዲያና ኦሮሞ በዝምድና የተገመዱ ወንድማማች ህዝቦች ስለሆኑ፣
16. በግል ጀዋርን ከልቤ ስለሚወደው፣
17. በአለም ዙሪያ ያለው የኦሮሞ ህዝብ የሚያደርገው አስደናቂ ትግል አበራታች ስለሆነ፣
18. የሀዲያን ክልልነት ጥያቄ ያለ ኦሮሞ ድጋፍ በጭራሽ ማሳካት ስለማይቻል፣
19. ቄሮና ቀሬ ሰላማዊ የለውጥ ሃይል መሆኑን በተግባር ያስመሰከራ መሆኑ እየታወቀ የቀኝ ክንፍ አክራሪዎች ቄሮን ለማጠልሸት የሚያራምዱትን የደቦ ፍረጃ ስለሚንቃወም፣
20. የኦሮሞ እና የብሔር ብሔራሰቦች የእኩልነትና የፍትህ ተራማጅ ፖለቲካ እንደሚያሸንፍ ስለሚናውቅ፣
21. የቀረውን እናንተ ጨምሩ…